Maninona ny DDP no tsy nitaraina momba ny kintana WCW WWE - Wwe
Ny antony tsy nitarainan'ny DDP momba ny fandevenana ny kintana WCW WWE
DDP (Diamond Dallas Page) dia mino fa mety ho nanao vivery ny ainy izy tao amin'ny Hall of Fame raha nitaraina momba ny tantaram-piainany WWE.
Tompondaka eran-tany WCW intelo te hiatrika an'i The Rock taorian'ny sonia nataony tamin'ny WWE tamin'ny taona 2001. Fa avy hatrany dia izy namandrika tamina tantaram-pitenenana stalker be fanakianana be miaraka amin'ny vadin'i The Undertaker, Sara.
Miteny eo The Angle Podcast , Nilaza ny DDP fa te handevina WCW i WWE mandritra ny zoro ‘Invasion’. Na dia nisy kintana WCW teo aloha aza nanana olana tamin'ny famandrihany tamin'ny WWE, ny DDP dia nisafidy ny tsy hiteny momba ny fitarainany momba ny tantarany:
WWE dia te handevina WCW rehefa tonga tany izahay, hoy ny DDP. Asa izany. Tsy izaho manokana. Noraisiko ilay izy fa fantatro raha nanampim-bava fotsiny aho, tsy nitaraina toy ny ataon'ny bandy hafa amin'ity seho ity na seho, apetraho ny orinasa. Ankehitriny rehefa manana [WWE] ny orinasa [WCW] izy ireo dia tsy maintsy mametraka ahy ao amin'io Hall of Fame io izy ireo amin'ny fotoana iray. Fantatrao, ahoana no tsy hahavitanao? Tsy mbola nisy nahita ny tantarako. Tsy misy olona. Ary rehefa nanomboka nandaka ny a ** izahay [WCW] dia nitsoka ny asako.
Ilay mpampiditra voalohany amin'ny 2017 #WWEHOF @RealDDP dia ampitaina amin'ny lampihazo miaraka amin'ny ZANAKY DIAMOND! @WWENetwork pic.twitter.com/iLegtSECQm
- WWE (@WWE) 1 aprily 2017
Niara-niasa tamin'ny superstar ny DDP, ao anatin'izany ny The Undertaker, The Big Show, ary Christian nandritra ny famoahana azy 12 volana tao WWE. Na dia niverina nanao hetsika an-tsehatra aza izy taty aoriana dia nisotro ronono ilay kintana WCW teo aloha tamin'ny 2002 ary nandao an'i WWE noho ny ratra teo amin'ny tendany.
Nahazo ny fampidirana Hall of Fame WWE tamin'ny taona 2017 ny DDP
Nandany 10 taona tao amin'ny WCW ny DDP teo anelanelan'ny 1991 sy 2001
inona no hatao raha tratry ny fisolokiana ianao
Ny mpihetsiketsika ao amin'ny WWE Hall of Fame dia matetika ampahafantarina ny momba ny fampidirana azy roa volana mialoha ny lanonana. Raha ny raharahan'ny DDP dia gaga izy rehefa niantso an-telefaona azy ny Triple H dimy volana talohan'ny lanonana 2017 hanomezana azy ny vaovao tsara.
'TSY MISY @WWEDustyRhodes TSY MISY @RealDDP !!! ' #WWEHOF pic.twitter.com/gnZbGfDIhv
Ny filohan'ny WCW teo aloha Eric Bischoff dia nampiditra ny DDP tao amin'ny Hall of Fame WWE. Nilaza ny DDP fa ny mpampianatra azy efa ela, Dusty Rhodes, dia ho nampiditra azy raha tsy maty tamin'ny 2015 izy.
Azafady azafady The Angle Podcast ary omeo H / T ny Sportskeeda Wrestling ho an'ny fandikana raha mampiasa teny nalaina avy amin'ity lahatsoratra ity ianao.
ny fomba anontaniana an'izao rehetra izao momba izay tadiavinao dia hahazoanao izany
ratsy kokoa ny fanararaotana am-bava noho ny ara-batana
maninona aho no mitomany mora foana rehefa tezitra aho
maninona aho no tsy afaka mijery ny mason'ny olona